Ihe ị ga-ahụ na Budapest | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Budapest, Ihe ị ga-ahụ
Budapest Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na obodo Europe na-aga na a na njem. Nye ndị njem nleta nke karịrị afọ 40, obodo ahụ bụ otu n'ime nkume pel a chọtara mgbe mgbidi Berlin dara. Taa, ọ bụ ezie na nke ahụ bụ ogologo oge gara aga, akụkọ ihe mere eme n'oge ochie na nke oge ochie pụtara ìhè n'akụkụ ọ bụla nke obodo a.
Ma ọ bụ obodo abụọ? Ọ bụ na Budapest bụbu obodo abụọ, Buda, na Pest. Ma ọ bụ karịa, atọ, n'ihi na dabuda nọkwa ebe ahụ. Kedu usoro, akụkọ ndị dị a ,aa, ihe omume dị a thisaa ka obodo a gabigara ịbụ otu n'ime ihe kachasị mma na Europe? ¿Kedu ihe anyị nwere ike ịhụ na Budapest ịmụta ihe niile?
2 Nlegharị anya na Budapest
Dika m kwuru n’elu obodo ugbu a bụ njikọ nke obodo atọ ochie, nke dị n'oge ochie dị ka mpaghara atọ dị iche iche: Buddha ọ bụ ocheeze nke ike ọchịchị, Pest mepụtara n'ihu na narị afọ nke XNUMX na Dabuda Ọ bụ akụkụ ime ime obodo.
Ebila mpaghara a kemgbe ọtụtụ puku afọ. Okwesiri ikwu ndị Rom gagharịrị ebe a, ọ bụ ezie na ọ malitere ịmalite nke ọma karị mgbe njikọ nke obodo atọ ahụ na 1873. N'oge ahụ na ruo mgbe Agha Worldwa Mbụ biri obodo gbanwere nnukwu obodo: àkwà mmiri, ngosi ihe mgbe ochie, cafes n'ebe nile, concerts, n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè.
Agha nke Abụọ mechara na 1956 mgbanwe, na-efu ọtụtụ mfu mmadụ na ihe nketa ụlọ.
Nlegharị anya na Budapest
Obodo na-adabere na abụọ nke Danube ya mere enwere akwa mmiri mgbe niile, mana el akwa bụ Chain Bridge. Ewubere na atụmatụ nke Count Szécheny na nke onye omenkà Britain na injinịa duo, ọ ka bụ akụ.
The àkwà mmiri na-arụ ọrụ biri na 1849, mara mma akwa mmiri na eriri nke bụ ihe ịtụnanya n’oge ya. O bu ihe nwute na ogbunigwe nke agha nke abuo bibiri ya, ma emechaa wugharia ma mezie ya. Were foto akwa ahụ, kpamkpam na-enwu n'abalịỌ bụ ihe ncheta dị mma nke akara ngosi nke obodo a.
Ebe ọzọ dị mma iji see foto nke Budapest bụ echiche nke Basilica nke San Esteban. Ọ bụ echiche kachasị elu na akụkụ nke obodo a, Pest ochie, ma nye anyị a Ọhụụ 360Nke di ebube. Basilica abụghị onye ọzọ karịa katidral nke Budapest yana ụlọ ọgbakọ omebe iwu ọ bụ otu n'ime ndị kachasị elu na obodo.
Ọ bụghị ụka ochie, ntọala ya bidoro n'afọ 1851 ma mechaa ya na mbido narị afọ nke XNUMX. Ihu ihu na-eche ihu na osimiri ahụ na ntọala ndị ahụ buru ibu dị ka chọọchị n'onwe ya. Ọ bụ neoclassical ịke, o nwere okpukpu mgbịrịgba abuo ma otu n’ime mgbịrịgba abụọ ahụ tọrọ ntọala n’oge agha. Na ya uka bụ Relic nke Santa Diestra, aka ọjọọ nke Eze Stephen nke Mbụ, mbụ eze Hungary na, senti.
Nwere ike ịrịgo site na steepụ ma ọ bụ ụlọ elu na ụlọ ịnyịnya, n'etiti ọkwa abụọ dị elu, enwere ụlọ nwere ihe atụ na ihe ngosi. Emegheri ya na 10 nke ututu ma mechie ihe dika 6: 30pm. Ọ bụ n'ọnụ ụzọ.
Ọzọ na-akpali ụka ma ọ bụrụ na-amasị gị dị nsọ ụlọ bụ mChọọchị nke Nwanyị Nwanyị nke Buda Castle. Ọ bụ nnukwu saịtị akụkọ ihe mere eme, mara mma, na ụdị gothic ma chọọ mma nke ọma. Mara amara na- saịtị nnabata maka ndị eze na taa ọ na-enyekarị egwu na ihe ngosi. A makwaara ya site na aha Chọọchị Matthias na dịka ọdịnala si dị n'otu ebe eze Hungary mbụ, Saint Stephen n'ikpeazụ, wuru ụlọ-nsọ ​​gburugburu afọ 1015.
Ndị eze ndị a niile gbakwụnyere nke ha mana ọ bụ Eze Matías nke Mbụ nyere ya nke ya Renaissance aka. O nwere oge mgbe ọ gbanwere alakụba n'okpuru alaeze ottomanma ọ bụ, ya mere na ọ bụ n'ezie a mara mma temple na magburu onwe acoustics. N'ebe a, dị ka eziokwu akụkọ ihe mere eme, e chiri Emperor Emperor Francisco José I, di nke Sissi ndị a ma ama.
El Dalọ Buda Ọ bụ ihe ọzọ nke kwesịrị-ahụ ebe nkiri mgbe na-eme njem na Budapest. Ruo ugbu a nwere ike iru site na egwuregwu, ndị kasị tụrụ aro na ọmarịcha. Carsgbọ ala ndị ahụ emeela ochie na echiche ndị kachasị mma. Na nkeji ihe ọ bụla ọzọ ejikọ Adam Clark Square na nnukwu ụlọ. Kemgbe 1987 bụ World Heritagely na-agba ọsọ ụbọchị ọ bụla site na elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere asatọ nke abalị. Ọrụ a na-agba nkeji ise ọ bụla ma ọ bụ iri, ọ dabere na ịchọrọ na mmezi a na-eme na Mọnde dị iche.
Buda Castle bụ ụlọ akụkọ ihe mere eme, a nnukwu ụlọ na obí eze mgbagwoju nke ndị eze Hungary. Ihe owuwu oge ochie malitere site na narị afọ nke XNUMX mana nnukwu, nnukwu ụlọ eze baroque anyị na-ahụ taa sitere na narị afọ nke XNUMX. O guzo n’elu ugwu n’okpuru ya nke mara mma Várnegyed or castle quarter, medieval, baroque and neoclassical myiri. Eziokwu bu na akụkụ a nke obodo ahụ bụ ebe ọgba aghara niile mere emebiwo ma wuo ya ugboro ole na ole, O di nwute, jiri otutu ihe omuma na ihe omuma.
Taa, ị nwere ike ịga leta ihe fọdụụrụ oge ochie, ụlọ ụka, halllọ ndị Gothic, ụlọ ndị eze, ime ụlọ emume, ime ụlọ eze na imecheeze, dịka ọmụmaatụ. Na ndịda nku nke nnukwu ụlọ na Budapest Museum Museum: ala anọ na ihe niile nwere ike ịmasị gị n'obodo ahụ.
El Ugwu Geller dị elu naanị 235 mita ma ọ bụ ịma mma nke osisi na-agbanwe agba dị ka oge. Ọ na-enyekwa anyị ezigbo panoramas nke obodo ahụ ma kpọọ aha ya iji sọpụrụ bishọp ndị Kraịst nke ndị ọgọ mmụọ gburu na 1046, n’ebe ahụ. Nke a bụ ebe ọ dị ụlọ elu, nnukwu ogige nke ndị agha, mana ụka, ama ama Gellèrt Spa na ụlọ nkwari akụ ya.
Thelọ nnukwu ụlọ ahụ malitere na narị afọ nke 48, mgbe oge a maara dị ka Revolutions nke 'XNUMX, iji chịkwaa mpaghara ahụ dum. Maka nke ahụ, etinyere ọtụtụ cannons. Mgbe e mesịrị, n'okpuru ọchịchị Soviet, ndị Ihe akpụrụ akpụ nke nnwere onwe, akara nke mmeri na Agha Worldwa nke Abụọ.
Anyị na-ekwu okwu tupu ụlọ omeiwu, ebe ị nwere ike ịga njem na njem ntụrụndụ nke kachasị elekere. Gara na dome ahụ na-eche eze eze Hungary okpuezeiji, dịka ọmụmaatụ, gala gala, ụlọ elu ma ọ bụ okirikiri. E wuru ya na ncheta nke puku nke obodo Hungary e sitere n'ike mmụọ nsọ nke ndị omeiwu kachasị ama ama nke EnglandỌ bụ n'ụdị Renaissance na Baroque.
N'ikpeazụ, anyị enweghị ike ịkwụsị ịkpọ aha Agwaetiti Margarita, agwaetiti ahịhịa ndụ nke 2800 nke bụ obodo kacha ewu ewu na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ebe ntụrụndụ. Ọ na-abụ ebe ịchụ nta ma taa enwere mkpọmkpọ ebe mgbe ochie, ogige tennis, ihe akpụrụ akpụ na ịgagharị na-enweghị ngwụcha. E nwekwara ọmarịcha ogige ndị Japan, otu Towerlọ Mmiri ochie na ọtụtụ osisi ndị mara mma.
La Andrássy Okporo ụzọ A mụrụ ya site n'aka mmeziwanye nke obodo ndị dị na Europe, gụnyere Budapest, nwere na narị afọ nke XNUMX. O doro anya na sitere na ụzọ ndị Parisian, a mụrụ ọmarịcha ụzọ, obere okomoko n'ihe owuwu ya, na mara mma nke ukwuu. Ọ bụ banyere ya na e nwere ndị Hungary State Opera, oflọ nke ụjọ Museum, ndị Academy nke Ọma Artss ... E nwere mpaghara atọ na pma ọ bụ n’okpuru ya nwere metro obodo ahụ, nke kasị ochie na Europe.
Nke ikpe azu ma obughi opekata mpe, mmadu enweghi ike ikwu maka Budapest n’ekwughi okwu banyere spas ma ndi amara aha ha bu Széchenyi Spa. Saịtị a nwere ọdọ mmiri 21 nwere ọrụ ọgwụgwọ dị iche iche ma mepee n'elekere isii nke ụtụtụ, na-emechi na 10 n'abalị. Ọ bụ ezigbo ahụmịhe na ahụ m n'ahụ ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị njem nleta na-arụsi ọrụ ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Budapest » Ihe ị ga-ahụ na Budapest